HomeWararka CaalamkaUK oo Mar kale dib loo Xirayo, Kiisaska Corona oo ku soo kordhay Dalka
Saynisyahanno badan ayaa ku cadaadinaya dawladda Ingiriiska inay dib u soo celiso xannibaadaha bulsheed isla markaana ay dardar geliso tallaallada xoojinaya maaddaama heerka caabuqa coronavirus, oo ah kan ugu sarreeya Yurub, uu weli sii kordhayo.
Boqortooyada Ingiriiska ayaa diiwaangelisay 49,156 xaaladood oo cusub oo ah COVID-19 Isniintii, waana tiradii ugu badnayd tan iyo badhtamihii bishii Luuliyo. Infekshannada cusub ayaa celcelis ahaan maalintii ahaa 43,000 maalintii usbuucii la soo dhaafay, taasoo ah 15 boqolkiiba oo korortay marka la barbar dhigo toddobaadkii hore.
Toddobaadkii hore, Xafiiska Tirakoobka Qaranka ayaa ku qiyaasey in mid ka mid ah 60 -kii qof ee ku nool England uu qabo fayraska, mid ka mid ah heerarka ugu sarreeya ee lagu arkay Ingiriiska intii uu socday aafadu.
Bishii Luulyo, dawladda Raiisel wasaare Boris Johnson waxay kor u qaadday dhammaan xayiraadihii sharci ee la soo rogay in ka badan hal sano ka hor si loo yareeyo faafitaanka fayraska, oo ay ku jiraan daboolidda wejiga gudaha iyo xeerarka fogeynta bulshada.
Goobaha lagu caweeyo iyo goobaha kale ee dadku ku badan yihiin ayaa loo oggolaaday inay si buuxda u furmaan, dadkana mar dambe laguma talin inay guriga ka shaqeeyaan haddii ay awoodaan.